Angona Momba Ny Ebola: Alahatry Ny Fikambanan’ny Bilaogera Ao Guinée Amin’ny An’ny Governemanta Ny Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2015 3:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Español, Français
Mpiasan'ny fahasalamàna miady amin'ny Ebola ao Afrika Andrefana CC-BY-20
Tato ho ato dia ny zavabitan'ny ekipam-pirenen'i Guinée tany amin'ny Fiadiana izay ho tompondakan'i Afrika amin'ny baolina fandàka, CAN2015, no nahavariana ny Gineana, ary saiky nanadinoany ny fitsipi-pahadiovana natao ho fiarovam-pahasalamàna tao anatin'ny haravoana niraisan'ny rehetra, niaraka taminà fifamihinana tsy tambo nisaina teny an'arabe.
Kanefa, nisy zavatra hafa mety nampiasa loha. Na teo aza ny angon-drakitra toa manondro fironana mankany amin'ny tsy fitàran'ny aretina, efa naharaisana tranga 2.921 nampiahiahy sahady ny valanaretina Ebola, ka 2.751 tamin'ireo no voamarina, nitarika fahafatesana 1.911 izay ny 1.591 no voamarina, hatramin'ny andron'ny 29 Janoary. Tena milaza ny zava-misy ve anefa ireo angon-drakitra ireo?
Ny hakitroky ny fiantraikan'ny aretina isaky ny prefektiora ao Guinée. Loharanon-tsary : internationalsos.com/ebola
Tany aloha, ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan'ireo bilaogera ao Guinée na Association des blogueurs de Guinée (Ablogui), tao amin'ny pejy Facebook-ndry zareo dia nanokatra adihevitra mikasika ny maha-azo antoka ireny angon-drakitra ofisialy ireny, sy ny fitondrantenan'ny sasantsasany amin'ireo mpikambana ao anaty governemanta. Adihevitra nanomboka taorian'ny fitsidihana nataon'i Sally Bilaly Sow, iray amin'ireo mpikambana ao aminy tany amin'ny distrikan'i Kokouma, vakim-paritr'i Dougountounni, prefektioran'i Mali. Nanoratra mikasika izay angon-drakitra tokony hitokiana io mpikambana io :
Inoako amin'ity tranga ity fa voatery tsy maintsy ny angon-drakitra avy amin'ireo olon-tsotra eny an-kianja no tsy maintsy ampiasaina. Saingy misy indro kely tsy haiko fehezina. Rehefa mivezivezy miaraka amin'ireo tompoandrakitra ara-pahasalamàna eny an-kianja aho, milaza mandefa tatitra momba ny iraka tontosainy ry zareo. Tsy haiko hoe mandeha mankaiza ireny tatitra ireny ary mampiseho ny tena zava-mitranga eny an-kianja ve ireny tatitra ireny ? Mikasika ny fomba ratsy tanaty fampahalalam-baovao nataon'ny minisitra iray nisehoanà mba handàvana ny fisian'ilay valanaretina dia inoako fa amin'izao toe-javatra izao no tsy maintsy andraisan'ny rantsana fitsarana ny andraikiny ka hanasaziany azy alohan'ny hisaoran'ny governemanta azy satria tsy voalohany tamin'ny nanaovany hadalàna izao. Etsy andaniny ny praiminisitra mandrahona ny hirotsaka hamely ny vahoaka izay misafidy ny làlan'ny tsy fitokiana mitondra ho amin'ny fanoherana. Nahoana no tsy manao tahàka izany amin'io minisitra tsy mendrika sy tsy misy fotony io satria voalohany indrindra dia olom-pirenena koa izy?
Ilay mpikambana Alimou Sow izay miasa ao Guinée misolo tena ny fikambanana iraisampirenena iray goavana ary efa zatra tsara ny fomba fanaon'ny fitantanan-draharaha ao no namaly hoe:
Mila raisina amin'ny fomba matotra sy am-pitandremana ireo tatitry ny OMS. Mandray kasinga maro samihafa ho ao anatin'ny kajikajiny ry zareo, izay mitondra mankany amin'ny famoahana vokatra mahazendana (fitomboana/fidinan'ny isan'ny maty nefa tsy tena nisy maty teny an-kianja nandritra ilay vanim-potoana voafaritra). Midika izany hoe mety miresaka zavatra tany aloha ilay angon-drakitra raha toa ka hita hoe fahafatesana noho ny Ebola ireo fahafatesana tany anaty vondrom-piarahamonina tany, saingy efa tratra aoriana (tsy ara-potoana ny fitsirihana, sns…). Ho any ady atao amin'ilay valanaretina, mazava fa kitsapatsapa ny fomba iatrehan'ny manampahefana azy, ary hatrany amboalohany no tsy nahomby ny fampitàm-baovao. Taorian'ny efa ho taona iray mahery, mbola mampanontany tena ny hoe drafitra fiadiana mahomby tahaka ny ahoana no tsy maintsy raisina ankehitriny.
Izay indrindra, mety misy fahataràna ny fampitàna ireo angon-drakitra. Saingy tsy manazava ny zavatra rehetra izany satria isaky ny tsirairay amin'ireny tondrozotran'ny OMS navoakany ireny, voasoratra ao ny herinandro nanaovany ny fanangonana azy.
Angamba mety hoe elanelana tsotra fotsiny teo amin'ny fampitàna ireo angon-drakitra ve ? Etsy ankilany, mahagaga raha ny governemanta, miainga avy amin'ny teninà minisitra iray, no ndeha handrahona olona mety ho sahy hanao fanoherana ikendrena ny hanasiana sakantsakana amin'ny ady atao amin'ity valanaretina eto amin'ity firenena ity ary tsy miteny na inona na inona rehefa injay ka mpikambana iray hafa ao anatiny no tonga hatramin'ny fandàvana ny fisiany.
Izay novalian'i Sally Bilaly Sow:
Ao anatin'ny fotoanan'ny Teknolojia isika izao ka tsy ny fahataràna no ho entina manazava izany. Midika tsy fahampiana fahaiza-manao izany, izay naka toerana be tamin'ny safidiny.
Kouyah Kouyate, ilay bilaogera tompon-kevitra tamin'ny fananganana ary nanokatra ny “ablogui” :
Heveriko fa ny fifanoheran'ireo tarehimarika dia vokatry ny antony samihafa voatanisa ery ambony. Tsy maintsy tsipihana ihany koa fa tena tsy fahita firy aty amintsika izany hoe hahazo angon-drakitra miaraka aminà tarehimarika ary tena marina izany. Tsy fahaizana ve sa finiavana handiso zavatra..?
Mikasika ny teny tsy manjary avy aminà olona mitàna toerana ambony indray, tsy zavatra mahagaga ahy intsony izany. Hatramin'ny niandohan'ilay valanaretina, nitsiry ny hevitra devoly tahaka izany, voalohany indrindra, tao an-dohan'ireo “avarapianarana” sasantsasany tsy mahalala na inona na inona. Ry zareo no niketrika ireny hevi-diso ireny. Tsy isalasalàna fa ry zareo no nisaron-tava nanosika ireo herisetra niteraka ny fahafatesan'ireo mpiady tamin'ny Ebola.
Thierno Diallo, mpamorona ny bilaogy Rivières du sud, Un œil sur la Guinée, ao amin'ny tambajotra mondoblog manampy hoe :
Inoako fa ny sasany amin'ireo olo-“maventin” ity firenena ity dia tomponandraikitra amin'izao toe-draharaha izao. Voalohany indrindra, niaraka tamin'ny eritreritra hanafina ny tena zava-misy no fomba nentina nitantanana ny raharaha. Tsaroana tsara ny tany ampiandohan'ilay valanaretina, nambaran'ireo manampahefàna ara-pahasalamana ho “fahafatesana natoraly” ny fahafatesana nateraky ny Ebola, kanefa ireo olona rehetra izay nikitika ny razana na ny marary dia vetivety monja dia samy nahitàna ny soritr'aretina avokoa. Raha androany no handrenesana avy amin'ny vavan'ny iray amin-dry zareo fa hoe tsy misy ny Ebola, tsy tokony hahagaga antsika izany. Na ohatra aza ny lojika ka tokony ho any amin'ny famaizana henjana azy, mba tsy hampiroboroboana an'io hevitra mampidi-doza io ao an-tsain'ireo izay mino ny fisiany, hatreto aloha. Ny fifanipahan'ny tarehimarika nomen'ny OMS sy ny an'ireo olon-tsotra eny an-kianja dia tsy inona fa taratry ny olana saropadin'ny resaka tarehimarika ao Guinée. Ambara fa ao “Guinée, ny mpandainga voalohany indrindra dia izay milaza fa manana ny isa tena izy amin-javatra iray voafaritra”. Tsy amin'ny resaka Ebola irery ihany, fa raha ny fivoarantsika ankehitriny, sarotra ny hahazo ary mety tsy hisy mihitsy aza, tarehimarika tena izy.
Ao anatin'ireo loharanom-baovao hafa izay mametraka fisalalàna momba ireny tarehimarika ireny no misy ny tranonkala “internationalsos.com/ebola” ihany koa. Amin'ny fandalinana ny tatitry ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny fahasalamàna (OMS) mandrakotra ny fe-potoana 21 hatramin'ny 28 Janoary, dia manome famintinana izy, izay tokony ho saintsainina:
Hitantsika tao anatin'ny herinandro farany (21 – 28 Janoary) . . .
Sambany ho an'ny taona 2015, fitomboan'ny tranga vaovao ao Guinée. Distrika valo no nahitàna tranga “vaovao” na “ahiana”. Nisy tranga 30 voamarina nandritra ity herinandro ity, tany Conakry ny sasantsasany, fa tany Forécariah ny ankamaroany.
Faritra roa no sambany nampilaza fisianà tranga tao aminy tato anatin'ny 21 andro : Kissidougou sy Macenta. Niatrika ny tranganà Ebola voalohany tao aminy ny prefektioran'i Mali. Mali dia tanàna iray any avaratr'i Guinée, amin'ny sisintany manasaraka azy amin'i Senegaly. Olona nivezivezy tany Libéria ilay narary ; izay mampivandravandra ny mahamora ny fianahan'ny Ebola miampita amin'ireo sisintany iraisampirenena.
teboka iray mampiasa loha koa ny hoe manodidina ny 30% amin'ireo tranga vaovao eo amin'ny firenena iray manontolo no efa voamarina ho tsy nisy fifampikasohana “voarakitra” niaraka tamin'ireo tranga efa fantatra. Mampiseho izany fa misy any fomba fifindràna hafa tsy mbola voatily. Amin'ireo 16 voamarina fa maty, eo amin'ny 20% no tany anivon'ny vondrom-piarahamonina, fa tsy tany amin'ireo rantsana natao hikarakarana ny Ebola.
Raha tsy misy mangarahara amin'ny ady atao amin'ity valanaretina ity avy amin'i Guinée sy ireo firenena hafa voakasik'izany, dia mbola ho lavitr'ezaka ny tolona ary indrisy fa mbola handravarava. Tsy tsara ve ny miaina manaraka ny ohatra nomen'i Sierra Leone, ilay firenena nampiseho mangarahara betsaka tokoa. Nataony ho tanaty faritra mihidy daholo ny mponin'ny firenena iray manontoolo na ny faritra sasantsasany, niaraka tamin'ny fandraràna tsy hivoaka ny trano nandritry ny andro maro mba hahafahan'ireo andiam-pitsabo manao fitiliana tanteraka ka hitsirihana sao misy tranga vaovao, sy hanazavàna ireo fepetram-pahadiovana. Izy no nànana ny isan'ny marary be indrindra, saingy ankehitriny dia mihena be mihitsy ny fahitàny tranga vaovao hatramin'ny nahatratrarany ny fetra ambony indrindra tamin'ny Desambra.